TCDD ရောင်းချခဲ့သည်စွပ်စွဲချက်တွေပြန်ဖြေတယ်! ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မေးခွန်းမဟုတ်ပါ RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီTCDD ရောင်းချခဲ့သည်စွပ်စွဲချက်တွေပြန်ဖြေတယ်! ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြTheနာမဟုတ်ပါဘူး
19 / 01 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TCDD
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) စိတ်ကြိုက်င်း၏ web site ကိုအပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်ထဲမှာစွပ်စွဲချက်မှတုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ကြေငြာချက်တွင်“ TCDD Tasimacilik AS ၏ပြည်သူ့ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည်ယခုနှစ်အကုန်တွင်အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရချီးမြှင့်သောရထားလမ်းအော်ပရေတာကထို ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ TCDD အတွင်းခရီးသည်နှင့်ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ် TCDD ကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောကိစ္စမရှိပါ။
TCDD ဖွငျ့ရေးသားထားသောကြေညာချက်၌၎င်း, “ အချို့သောစာဖြင့်ရေးသားထားသောအင်တာနက်မီဒီယာများတွင်“ သူတို့ TCDD ရောင်းသည်” ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ထုတ်ဝေထားသော UNRIGHT NEWS နှင့် ပတ်သက်၍ လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်သည်။
အဖြစ်လူသိများသည်, "မီးရထားပို့ဆောင်ရေး၏လစ်ဘရယ်အပေါ်တူရကီ, အမှတ် 1 ဥပဒေ" ဟုအဆိုပါရထားလမ်းကဏ္ဍ၏လွတ်လပ်နှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့သည်မေလ 2013, 6461 တွင်အင်အားစုသို့ရောက်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်လေကြောင်းလိုင်းကဲ့သို့ပင်ရထားလမ်းကဏ္ effectively ကိုထိရောက်စွာဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီးပုဂ္ဂလိကရထားလမ်းလုပ်ငန်းများကို TCDD နှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာန၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
ရထားလမ်းလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေပြ6461္ဌာန်းချက်ကို ၆၄၆၁ တွင်ပြဌာန်းခဲ့ပြီး TCDD မှလွဲ၍ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ operators ရထားလုပ်ငန်းရှင် ၂ ဦး သည်ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခွင့်ပြုချက်ကို ရယူ၍ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများစတင်ခဲ့သည်။ ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ train ရထားလုပ်ငန်းများကိုခွင့်ပြုချက်ရယူသည်။
ရထားလမ်းဖြင့်ခရီးသည်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဖြစ်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းများ၌စီးပွားဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်စာချုပ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော TCDD Tasimacilik AS ၏အများပြည်သူဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ယခုနှစ်အကုန်တွင်ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရချီးမြှင့်သောရထားလမ်းအော်ပရေတာကဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းရှိအရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောနှင့်စီးပွားရေးအရရထားလမ်းလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ရန်ရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ဆက်လက်၍ တည်ရှိနေသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပြင်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအစုံ၊ လျှပ်စစ်နှင့်ဒီဇယ်အစုံများပါ ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် TCDD မှရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။
TCDD အတွင်းခရီးသည်နှင့်ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ် TCDD ကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောကိစ္စမရှိပါ။ ”
TCDD: ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး high-speed ကိုရထားနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်ပါဘူး
TCDD Tasimacilik ဗီဒီယိုနှင့်အတူတိုးမြှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်
Kılıçdaroğlu၏Kadyköy-Kartal မက်ထရို၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်။ စွပ်စွဲချက် ...
မီးရထား၏ပုဂ္ဂလိကပိုင် cankesen စွပ်စွဲချက်တုံ့ပြန်ရန်နိုင်သလား
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်3။ လေဆိပ်ထဲမှာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုစွပ်စွဲချက်မှတုန့်ပြန်
Karabük nihai ရှိကွဲပြားခြားနားသောအိမ်ခြံမြေသုံးမျိုးအတွက် TCDD ၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရန်တင်ဒါခေါ်ခြင်း
Palandökenနှင်းလျှောစီး Center ကပုဂ္ဂလိကပိုင်အားထုတ်မှု
Kadıköy Sultanbeyli Metro အတွက် EIA သည်မလိုအပ်ပါ ဆောက်လုပ်ရေးစတင်
Kadir မစ်ရှင်အတွက်ခွင့်ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတုံ့ပြန် လာ.
Medipol ထံမှအဖြေရောက်ရှိခဲ့သည်! '' TCDD နောက်ဆက်တွဲနှင့်တည်းခိုခန်းကျနော်တို့ 29 နှစ်ပတ်လည်ငှားရမ်းထားသော ''
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ sector ရထားစီမံခန့်ခွဲမှု